BETA PUBG MOBILE APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
BETA PUBG MOBILE APK ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
BETA PUBG MOBILE APK ကိုဒေါင်းလုပ်
အသုံးမဝင်သော ကျွန်း, အဆိုပါ # 1 ဖုတ်ကောင်ဂိမ်းကစားခြင်း စုဆောင်းမှု, ယင်းအပေါ်ကြွလာ ဆဲလ်ဖုန်း! စုဝေး သင့်ရဲ့သူရဲကောင်းတီးဝိုင်း, သင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းခိုင်မာအောင်နှင့်အတူဝင်လာသောအလုံးအရင်းရင်ဆိုင်ရ သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်!
PLAYERUNKNOWN'S စစ်ဝင် ဆဲလ် – ထူးခြားတဲ့ စစ်တိုက် Royale အနားယူခြင်း ယခု လက်လှမ်း သင့်ရဲ့အတွင်း စံနစ်!
1. MOBILE အပေါ်တရားဝင် PUBG
100 ဂိမ်းကစား တစ်ဦးပေါ်သို့လေထီး ဝေးကွာသော 8×8 showdown.Players မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လက်နက်များရှာဖွေခြေရာခံသင့်ပါတယ်တဲ့-ကြာ-အားလုံးဆုရှင်များအတွက်ကီလိုမီတာကျွန်း, ကားများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်တစ်ဦးကျုံ့ကစားဧရိယာသို့ကစားသမားတွန်းအားပေးတဲ့အသေးစိတ်နှင့် Tactical ကြွယ်ဝသောစစ်မြေပြင်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူအနိုင်ယူ. သငျသညျဆင်းသက်နိုင်ပါတယ်, ပြီးခဲ့သည့်လူကိုရှင်သန်နှင့်ဖြစ်ဘာမှကိုလု ယူ. ပြုပါ!
2. ပိုမိုသော-အရည်အသွေးအရစ်ဖစ်များနှင့် HD ကိုအသံ
အဆိုပါအလွန်အမင်းထိရောက်သော Unreal Engine ကို4ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖန်တီး, ချမ်းသာကြွယ်ဝသောဒြပ်စင်များနှင့်မြင်နိုင်ကျွမ်းကျင်သူအသိပညာ, လျောက်ပတ်သောဂိမ်းရလဒ်များနှင့်တိုက်ပွဲ Royale အဘို့ကြီးစွာသော HD ကိုကဒ်. သငျသညျက high-quality audio ကအတူဆော့ကစားသကဲ့သို့သင်တို့လုပ်ဆောင်ချက်၏အလယ်တွင်ရောက်နေတူခံစား, 3D သံကို haunting, ကာခုနစ်ရုပ်သံလိုင်းသံကို.
သုံး. Lifelike လက်နက်များ
သေနတ်တစ်ခုအစဉ်အဆက်-ကြီးထွားလာလက်နက်တိုက်, Mele လက်နက်နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော် ballistics နှင့်ခရီးသွားသမိုင်းနှင့်အတူလက်နက်များပစ်သင်ရိုက်ကူးဖို့ရှေးခယျြမှုပေးသည်, နှိမ့်ချခေါက်သို့မဟုတ်သင့်ပြိုင်ဘက်ကိုမီးရှို့. Oh, နှင့်သင်ရုံဒယ်အိုးနဲ့တူ? ကျနော်တို့ဒယ်အိုးဝယ်.
လေး. ခရီးသွားခြင်း တွင် ပုံစံ
Commandeer ၏ကျယ်ပြန့ အော်တို နှင့်အတူတကွ မော်တော်ယာဉ်, ဗင်န, စက်ဘီး, နှင့်စက်လှေမှ ထွက်ရှာဖွေ သင်၏ရန်သူတို့ကို, ပြဇာတ်ဇုန်မှသူတို့ကို Race သို့မဟုတ်လျင်မြန်သောထွက်ပေါက်အောင်.
5. ဝန်ထမ်း အတူတက် Buddy
အတူစစ်တိုက်ရှင်သန် သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်. Invite နှင့် လူစု အတူတက် သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်, သင့်ရဲ့စစ်တိုက်မည့်အစီအစဉ်ကိုသြဒိနိတ် လမ်းဖြင့် စကားသံကို chat နဲ့ စီစဉ် အမှန်တရား တပ်ပုန်းထား.
6. ဖွောငျ့မှနျသော ဂိမ်း လေထု
မြင့်မားထိရောက်သော Anti-cheat ယန္တရားများ အာမခံချက် တစ်ဦး နှစ်သက်ဘွယ်သော နှင့် ဖွောငျ့မှနျသော ပတ်ဝန်းကျင် အားလုံး PUBG မိုဘိုင်းအတွက် ဂိမ်းကစား.
မဟုတ် ရိုးရိုး တစ်ဦးက အားကစား. ဒါဟာတိုက်ပွဲ Royale Is.
* တစ်ဦး persistent လိုအပ်ပါတယ် ဝဘ် ကွန်နက်ရှင်.
* အကြံပေးသူ ရတဲ့အဘို့အကျန်တာတွေ ဖြစ်ကောင်းအများဆုံး PUBG MOBILE ထဲက: အန်းဒရွိုက် 5.1.1 သို့မဟုတ်အထက်နှင့် အဆိုပါအနည်းဆုံး2GB ကို RAM.If အမှု၌သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်ကိစ္စများရှိ,
ပစ္စုပ္ပန် ဗားရှင်း မ သင်္ကေတ အဆုံးစွန် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ၏ အားကစား အဖြစ် ကျနော်တို့သွားဖို့ရှိပါတယ် ထိန်းသိမ်းရန် အကောင်းဆုံး လက်ဆောင် အကြောင်းအရာပစ္စည်း နှင့် အပါအဝင် အသစ်က ရွေးချယ်မှုများ.
အမှု၌သင်တို့ကို မှအကျိုးကျေးဇူး အနားယူခြင်း, ကျေးဇူးပြု ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ် အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အပေါ် fb! PUBG MOBILE တရားဝင် fb ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ: http://www.facebook.com/PUBGMOBILE
အမှု၌သင်တို့ရှိပါက မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ် ကိစ္စများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု [email protected] မှာ
စုစည်းရရှိ, ဆော, တိုကျပှဲ … AND ရှင်သန်!
ပြင်ဆင်ထား ဘို့ ပြီးခဲ့သည့်စကားလုံး ဖုတ်ကောင် motion RPG ကျွမ်းကျင်မှု စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet များအတွက် – နက်ရှိုင်းသောငွေရဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစွမ်းအားဖြင့် အသုံးမဝင်သော ကျွန်း စုဆောင်းမှု, ကျော်နှင့်အတူ 15 သန်း ပစ္စည်းများ ဝယ် PC နဲ့ console ကိုအပေါ်. စုရုံး ဒဏ္ဍာရီသူရဲကောင်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာလက်နက်များ. တည်ဆောက် ဉာဏ်ကောင်းသော ထောင်ချောက်များနှင့် တည်ငြိမ် အတားအဆီးတွေ. အံ့မခန်း combo ကိုသုံးပါနှင့် ထူးခြားတဲ့ အထူးသဖြင့် သပိတ်. လုပ်ပါ အဘယ်သူမျှမကိစ္စ သငျသညျနိုင်ပါလိမ့်မယ် ထိန်းသိမ်းထားဖို့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ghastly ဖုတ်ကောင်အလုံးအရင်း!
• နှစ်သက်ကိုယူ Mele အတွက်အရေးယူ-ထုပ်ပိုးဂိမ်းနှင့် မြှူ ရွေ့လျားမှု!
• စုရုံး အဆိုပါဖုတ်ကောင်ရင်ဆိုင်ရဖို့အထင်ကရသူရဲကောင်းများ!
• တည်ဆောက် နှင့်သင်၏အခြေစိုက်စခန်း ဉာဏ်ကောင်းသော အလုံးအရင်းကိုချွတ်ကာမိမိဘာသာအားကိုးထောင်ချောက်!
• ရှာဖှေတှေ့ နှင့်လွတ်မြောက် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်, handcrafted ကျွန်းများ!
BETA PUBG MOBILE ကို Tencent အားဖြင့် ဗီဒီယိုဂိမ်းများ
UC Browser ကို .apk ဒေါင်းလုပ်
Google က Go ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Google App APK ကိုဒေါင်းလုပ်
YouTube ကိုဂီတ APK ကိုဒေါင်းလုပ်
GrowBox APK ဖိုင်ဒေါင်းလုပ်
ဒီမှာ BETA PUBG MOBILE APK ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
ပုံစံ: သုည.7.သုည (8644)
ဗိုလ်လုပွဲ နောက်ဆုံးပေါ်: ဇူလိုင်လ 23, 2018
GrowBox APK ကိုဒေါင်းလုပ် | TechnoCobra
org 2018 APK ကိုဒေါင်းလုပ် – အခမဲ့သီချင်းဖွင့် & Android အတွက် audio APP
Samsung ကအင်တာနက်ကို Browser ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
မိသားစု Guy Freakin မိုဘိုင်းဂိမ်း APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ